Askari ka tirsan ciidamada Somaliland oo Yubbe ku dilay taliyihiisii – DMS
HomeWararkaAskari ka tirsan ciidamada Somaliland oo Yubbe ku dilay taliyihiisii
Askari ka tirsan ciidamada Somaliland oo Yubbe ku dilay taliyihiisii
Wararka ka imaanaya gobolka Sanaag ayaa sheegaya in shalay galabnimadii uu deegaanka Yubbe ee gobolkaasi Sanaag uu ku dilay askari ka tirsan ciidamada Somaliland taliye kamid ahaa ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan deegaankaasi.
Taliyaha dilay oo lagu magacaabi jiray G/dhexe Nayjeeri ayaa sida la sheegay waxaa dilay askari ka tirsan ciidankiisa oo muran uu soo kala dhex galay, waxaana muran dheer kadib uu ku furay rasaas taas oo sababtay in uu u geeriyoodo taliyuhu.
Askariga dilka gaystay oo isku dayey in uu goobta ka baxsado ayaa isna waxaa halkaasi ku toogtay ciidamo la socday taliyaha, kadib rasaas mudo kooban socotay oo dhex martay isaga iyo ciidamada kale ee Somaliland.
Taliska ciidamada Somaliland ee gobolka Sanaag ayaan weli ka hadlin dhacdadani mana aha markii ugu horaysay oo askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu fal toogasho ah ku dilo taliyihiisa.
Booliska Giriiga oo gacanta ku dhigay gaari ay saarnaayeen Muhaajiriin Soomaali ay ku jirto